နာမည်ပျက်စာရင်း (Black List) ၀င် ၃၀၀၀ ပယ်ဖျက်၍ မရတော့ဟု ဦးအောင်မင်း ပြော | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« နိုင်ငံသား တိုင်းရဲ့လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ် ယုံကြည်ခွင့်တွေကိုအာမခံချက်ပေးမည့် ဘာသာရေးပဋိပက္ခများ မဖြစ်အောင် ထိထိရောက်ရောက် တားဆီးနိုင်မည့် ဥပဒေ
The Coalition Against Religious Extremism In Myanmar.(မြန်မာနိုင်ငံက ဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှုကို ဆန့်ကျင်သော ညွှန့်ပေါင်းအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်၍ ကန့်ကွက်၊ ဆန္ဒဖော်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ »
နာမည်ပျက်စာရင်း (Black List) ၀င် ၃၀၀၀ ပယ်ဖျက်၍ မရတော့ဟု ဦးအောင်မင်း ပြော
And what about Myanmar Passport holders like me, is there any list sent to Myanmar Embassies not to entertain the Passport extension of the persons, their family members and relatives? FYI Myanmar Embassy in Malaysia is currently doing these on Myanmar Muslim Professionals working with valid visas and legally in Malaysia. Why R they targeting Muslims when Buddhist illegals even without Passports are legalized and issued with new Passports. This is the clear case of Religious Discrimination on Racist Myanmar Embassy Officials….I am working in my busy clinic 12 1/2 every day, 363 days per year, almost never go out after clinic hour, never involve with any TERRORIST groups, never commit any crime BUT just an active Human Rights activist on FB and blog. Even up to September many Embassy official staff are coming to my clinic for FREE OF CHARGE TREATMENTS. Just because Myanmar Military Cyber-troopers defamation with lies…they Foreign Ministry and Naypyidaw should not instruct its Embassy to commit Human Rights abuse on me.
The Irrawaddy (Burmese Version)‘s status.
ဧရာဝတီ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၅ ၊ ၂၀၁၃လက်ကျန် နာမည်ပျက်စာရင်း(Black List)၀င် ၃၀၀၀ သည် နိုင်ငံတကာ ရဲတပ်ဖွဲ့အင်တာပိုနှင့် တခြားနိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အမည်ပျက် စာရင်း၌ ပါဝင်သူများ ဖြစ်၍ ၎င်းတို့အား ပယ်ဖျက်ပေး၍ မရကြောင်း သိရသည်။ သမ္မတရုံး ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း က တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ(UNFC) အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ယမန်နေ့က တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် လက်ထက်တွင် အမည်ပျက်စာရင်းဝင် ဦးရေ ၂၈၀၀၀ ရှိကြောင်း၊ ၂၅၀၀၀ မှာ ပယ်ဖျက်ပေးပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
Tags: Buddhism, Burma, Diplomatic mission, Irrawaddy, Malaysia, Muslim, Myanmar, Rohingya people
This entry was posted on November 25, 2013 at 12:09 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.